Ati hiree qabda?
Dhufawwan haaraa barnoota Ingilliffa Biliisaa
Waa’ee Sagantaa Ingiliffa Godaansa Ga’eessaa
Argamuu hanga 510 barnoota Ingiliffaa bilisaa fi kunuunsadaa’iimaa bilisaa(yoo mijaawu).
Barachuu Ingiliffa hojiin jireenyaaf,hojjechuu fi barachuu Awustiraaliyaa keessatti.
Akkamitti argachuu barumsa mootumma fi tajaajiiloota hawaasaa.
Hirriyoota haaraa uumuu kan amma Awustiraaliyaatti sochoo’aan.
Hojiif amma qophaa’u yookiin barachuu fi fulduura keef karoorsuu.
Ati kan murteffamte viisaa godaansa mijaawaa gara Awustiraaliyaa. Maaloo galmeesi ji’oota jaha nagahee xalayaa viisaa kee.
Ati ni qabda maatii,dandeeffame,namummaa,warra yookiin viisaa yeroo gabaabaa mirkannaa‘e.*
Ati kan dubbaachhuu/dubbiisuu/barreessuu Ingiliffaa hin dandeesu yookiin Ingiliffa kee fooyyeesuu.
Ati umrii 18 oli. Ga’eesootni godaansa muraasa umrii 15-17 tarii kan mijaawu ta’a.
*Maaloo hubadhu Viisaawwan yeroo murtaa’eef mirkannaa’e kan hin hammaanne hojii fi ayyaana viisaa,hojjechuu ayyaana viisaa yookiin viisaawwan daawwataa.
Carraawwan barachuu jijjiiramaa
Barachuu yeroo-guutuu yookiin kallatiiwwan qarqara Queenslaaandii.
Kan deegaramte ta’i karaa fedhii qo’achuu manaa yookiin yoo ati yeroo-guutuu barachuu hin dandeenye.
Barachuu sararairraa karaa barnoota fagoo.
Guuti AMEP kee waggoota shan Awustiraaliyaa gahuumsa keessatti.
Ani daree keessatti maal baradha ta’a?
Hirmaadhu daree sadarkaa Ingiliffa siif mijaawu.
Kan deegaramte ta’a karaa biroowwan Walitti Hawaasaa fi AMEP kee Dhimma Hogganaa yeroo ati baratu.
Baradhu waa’ee bakkahojii afaan Awustiraaliyaa,aadaa fi shaakkaliiwwan.
Qo’achuu gahuumsa Ingiliffaa dabalataa yoo ati qabaate barnoota murtaa’e yookiin kan dhimmoota dandeetti barachuu kee hubu.
Gahuumsa kunuunsadaa’imma bilisaa yeroo Ingiliffa barachuu (dhimma gara mijaawummaa).
Gaaffiiwwan afaaniif qopheesuu fi barreesuu ittifufuu.
Dabaluu oli gara 80 sa’aatiiwwan muxxannoo hojii.
oddeeffannoo qabdu fee‘uu
Fuula kana hiruu
Ani akkamitti galmaa’a?
Bilbiilu: (07) 3244 5488
Daawwachuu TAFE kallaatii Queenslaandii sitti dhihoo.
Maaloo paaspoortii kee qabachuu fi oddeeffannoo viisaa qophaa’e.
Madaalii afaan Ingiliffaa guuti Dhimma Hogganaa AMEP waliin.
Dhimma Hogganaa AMEP kee kan qindeessu gara daree.
Gaafachuu amma waa’ee waan baratamaanii Ingiliffa keenyaa
Maqaa maatii (akka paaspoortii irraatti agarsiifame) *
Maqaa kenname *
Lakkoofsa bilbiilaa *
Biyya dhalootaa * Australia Åland Islands Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Caribbean Netherlands Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Republic of Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Curaçao Cyprus Czech Republic Côte d'Ivoire Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federated States of Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island North Korea Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestine, State of Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russian Federation Rwanda Réunion Saint Barthélemy Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Saint-Martin (France) Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten (Dutch part) Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands South Korea South Sudan Spain Sri Lanka St. Pierre and Miquelon Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand The Netherlands Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican Venezuela Vietnam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Wallis and Futuna Islands Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe Other
Guyyaa dhalootaa (akka paaspoortii irraatti agarsiifame) * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Afaanoo	a dubbaatame (akka paaspoortii irraatti agarsiifame) * Afar Afghan Other African Other Akan Albanian Amharic Anuak Arabic (MSA) Arakanese Armenian Assyrian Azerbaijani Azeri Balochi/Baluchi Belorussian Bembe Bengali Bisaya/Visaya Bislama Bosnian Bulgarian Burmese Other Burmese/Myanmar Cantonese Cebuano Chin Chin Falam Chin Haka Chin Khumi Chin Mo Chin Tedim Chin Zome Chinese Other Creole (African) Croatian Czech Dari Dinka Dutch Estonian Farsi/Afghan Farsi/Persian Fijian Filipino Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hakka Hazaragi Hindi Hmong Hungarian Ilonggo Indian Other Indonesian Iranic Other Italian Japanese Karen Karen S'Gaw Khmer Kinyarwanda/Rwanda Kirundi/Nyarwandwa/Rundi Korean Kuku Kurdish Lao Latvian Liberian English Lingala Macedonian Malay Maltese Mandarin Mandingo Mongolian Nepali Nuer Oromo Pacific Island Pidgin Pashto PNG Other Polish Portugese Punjabi Rohingya Romanian Russian Samoan Serbian Sindhi Sinhalese Somali Spanish Sudanese Arabic Swahili Swedish Tagalog Tamil Teke-Tege Telugu Telusu Thai Tibetan Tigre Tigrinya Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Yoruba
Yoo afaan kee hin tartiibeeffamne dha, maaloo adda baasi
Isiin kunuunsadaa’iimaa ni barbaaduu? (Daa’iimoota umrii 6 gadi qofaa)
Isiin Walakkaakutaawwan Viisaa armaan gadii kamuu qabduu? *
Isiin Walakkaakutaawwan Viisaa armaan gadii kamuu qabduu?
Walakkaakutaa Viisaa koodii addabaasuu dijiitii-3 dha (fkn. 100 yookiin 309) viisaa keessani. Inni kan irra dubbaame keelloon akka fakkeenya kanatti.
Lakki - Maaloo adda baasi
Lakkoofsa Deegarsa Viisaa
Lakkoofsa Deegarsa Viisaa adda dha lakkofsa diijiitii-13 kan hamaatame qubee Beeksiisa Deegarsa Viisaa keessaatti yookiin imeelii,Mummee Godaansa fi Eguumsa Daangaa gara keeti ergame gorsaaf kan ati mirkanneessitte viisaaf gara Awustiraaliyaa. Inni kan irra dubbaame keelloon akka fakkeenya kanatti.
Ati eessaatti barachuu filatta? (argamummaa gosa barnootaa) Biloela Bowen Hills Bracken Ridge Browns Plains Bundaberg Bundamba Caboolture Cairns Caloundra Chincilla Coolangatta Coomera Emerald Gatton Gladstone Grovely Gympie Hervey Bay Inala Innisfail (Johnstone) Kingaroy Logan Central PCYC Loganlea (Meadowbrook) Mackay Maroochydore Maryborough Mount Gravatt Mount Isa Nambour Noosa Redcliffe Rockhampton Roma South Bank Southport Sunnybank Toowoomba Townsville Warwick Yeerongpilly
Ati waa’ee keenya eessaatti dhaggeese? TAFE Websites Visa grant letter Facebook YouTube Facebook Newspaper or magazine Migration agents Community organisations Friends or family At events
Ati bakka biroo kamituu dhaggeessetaa waa’ee keenya? Maaloo adda baasi